Ị nwere ike ịkọwa m mkpa nke ndebanye aha engine?
E nwere atọ ntinye ugwo ochichi kachasị ebe o choro ibunye ebe gi - Google, Bing, na Yahoo. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-abịa na ibe SERP mbụ nke ihe nchọgharị ndị a nile, ọ bụ ezigbo ihe ịrịba ama maka gị na-egosi na saịtị gị kachasị mma ma debe ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọbịghị nso TOP, ọ pụtara na ndị ahịa gị nwere ike ịchọta ebe ị ga-esi nweta weebụ ma wepụ ohere ị nwere iji mee ka ego gị dịkwuo mma ma melite njirimara gị.Iji meziwanye ọnọdụ a, ịkwesịrị ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ weghaara, mepụta mkpọsa mgbasa ozi na-emeri ma nyefee ebe nrụọrụ weebụ gị iji nweta engines ọchụchọ.
Gịnị mere m ga-eji nyefee saịtị m iji chọpụta engines?
Cheedị banyere ọnọdụ ahụ ị merelarịrị na saịtị gị ma mee ọbụna ka saịtị weghachite, mana ọkwa gị ka dị ala. Gini bu ihe kpatara ya? Aga m agwa gị ihe nzuzo mere i ji nwee nsogbu dị otú ahụ. Ngwongwo ogugu enweghi ike inyocha onu ogugu SEO dika adighi edozi ebe gi na usoro ha. Site n'itinye saịtị gị iji chọpụta engines, ị depụtara ha ma nwee ike ịmepụta okporo ụzọ ọchụchọ. Ọzọkwa, ị na-enweta ohere iji gosi engines ọchụchọ niile nwelite weebụ gị ma gbanwee ozugbo i mejuputara ha. Ndị nwe ụlọ ọrụ na-erite uru site n'itinye ha na ebe nrụọrụ weebụ ka ha wee chọpụta engines dị ka ha nwere ike isi melite ọkwa ha ma bulie ọnụego mgbanwe.
Olee otu esi eme ndebanye aha na engines ọchụchọ?
Ọ dị nnọọ mfe idobe saịtị gị na Google. Ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ jupụta ụdị ndebanye aha ogologo. Maka ịnyefe saịtị gị na Google, ịkwesịrị ịtọlite ​​saịtị gị na Google Search Console. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-aga na ibe weebụ Google maka URL na-edozi. Iji mezuo ọrụ a, ịkwesịrị itinye ebe nrụọrụ weebụ gị na URL na igbe ọchụchọ, gosi na ị bụ mmadụ site na itinye nlele "Abụghị m robot" wee pịa "Tinye URL. "Ọzọkwa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya idobe map saịtị gị site na Google Search Console.
Ị nwere ike idobe saịtị gị na Bing n'otu ụzọ ị si ewetara ya Google. Iji debanye aha gị na saịtị a, ị ga-aga Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Bing ma deba aha ya dịka onye ọrụ. Ozugbo i nwetara nbanye, ịkwesịrị ịtinye ebe obibi gị URL ma pịa bọtịnụ "Nyefee". Mgbe ị kwadoro usoro, ịkwesịrị iji nyochaa njirimara gị nke ngalaba. Iji mezue usoro nkwenye, ịkwesiri itinye akụkụ nke koodu HTML na nkụnye eji isi mee nke saịtị gị.
Ebe ọ bụ na nso nso a, Microsoft nwere ma ọ bụ Bing ma Yahoo search engines. Ọ pụtara na mgbe ị nyefere saịtị gị na Bing, ị ga-apụta na nsonaazụ ọchụchọ Yahoo. N'oge gara aga, a na-akwụ ụgwọ nrubeisi Yahoo. Otú ọ dị, n'oge a ndekọ a adịghịzi adị Source .